मैले देखेको पुरुष'माथिको हिं'सा - Muldhar Post
मैले देखेको पुरुष’माथिको हिं’सा
पत्रपत्रिकाबाट २०७६, ४ आश्विन शनिबार 1196 पटक हेरिएको
श्रद्दा के.सी-हजारौं लेख देखें, जो महिलाका हकहितका लागि लेखिए । हजारौं सभा समारोहमा केवल महिला कै कुरा निस्किए । तर मौन भएर हजारौंको भिडमा उभिएको पुरुषलाई कसैले सोध्न सम्म भ्याएन । के छ उसको पीडा ? हो म पनि एक महिला हो । मैले पनि लेख्नु पर्थ्यो, महिलाका गीत, आमाका कविता अनि महिलाको अधिकारको बारेमा । तर मैले लेखिनँ किनकी यहाँ महिला मात्र कहाँ हो र ! कुनै न कुनै ठाउँमा पुरुष पनि हिंसामा छन् ।
एउटा भनाई छ नि,”पुरुषको तलब अनि महिलाको उमेर कहिल्यै सोध्नु हुदैँन ।” किनकी महिलाहरु कहिल्यै आफ्नो लागी बाच्दैनन् र पुरुषहरु कहिले आफ्ना लागी कमाउँदैनन् । भन्छन्, छोरी-मानिस दुई घरको भाग्य लिएर जन्मिन्छन् । फेरी सबैले यो किन सोच्दैनन् कि छोरा पनि दुई घरको जिम्मेवारी बोकेर जन्मिछन् ? एउटी नारी सँगसँगै उसले आफ्ना जिम्मेवारी पनि अङ्गालेको हुन्छ, उसका जिम्मेवारीहरू पनि बढेका हुन्छन् ।
हो, आमा महान छिन् । आमाको मूल्य अमुल्य छ । हामी जन्मिदाँ आमाको शरीरबाट कैयौँ लिटर खुन बग्यो होला । हामीलाई पिलाएको दश धारा दुधको मूल्य कसैगरी चुकाउँन सकिँदैन । म मान्छु, आमाले संसार देखाउँछिन् । नौ महिना कोखमा राख्छिन् । उनको पीडा उनको दुख वर्णन गरी साध्य नै छैन । हर कोही भन्छन्, आफु जन्मेको घर छुट्छ । तर यो किन सोच्दैनौ तिम्रो जिन्दगीमा अर्को घर पनि त जोडिन्छ, तिम्रो जिन्दगीको नयाँ सुरुवातमा तिमी सँगसँगै उसको नाम जोडिन्छ । जो तिम्रो जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण पाटो बन्न पुग्छ ।
यही ठाउँमा बुवालाई राखेर हेरौँ त । जिन्दगीभरी आफ्ना सन्तान आफ्नो परिवारको लागि दुख गर्दा उनको शरीरबाट बगेको पसिना के आमाको शरीरबाट हामी जन्मिँदा बगेको रगत भन्दा कम छ होला र ? उनीले सन्तानका लागि गरेको त्यो दुःख त्याग कुनै आमाको भन्दा कम छैन जस्तो लाग्छ । एउटा बच्चा जन्माउँदैमा आमा भइदैन जस्तो लाग्छ । यदि त्यसो हुँदो हो त दिनानुदिन जन्मँदै फालिएका कति अबोध बच्चा छन् । कति कोख मै मर्छन् । कति सडक मै सड्छन् । जसलाई तिनै आमाले जन्माएकी हुन । हो ! म मान्छु, जन्म दिने आमा महान् हुन्छिन् । तर जिम्मेवारी बोक्ने मेरो बुवा पनि मेरो लागि उत्तिकै महान छन् । श्रद्दा के.सीले लेखेको यो लेख हामीले सल्लेरी खबरबाट साभार गरेका हाैं ।